Hlola i-Al Ain, United Arab Emirates - World Tourism Portal
Hlola i-Al Ain, United Arab Emirates
I-Al-Ain inezindawo ezinkulu ezinhlanu
Ongakubona e-Al Ain, e-UAE. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili e-Al Ain, UAE
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Al Ain, UAE
Bukela ividiyo mayelana ne-Al Ain, UAE
Hlola i-Al Ain the Garden idolobha I-United Arab Emirates. Leli dolobhana lase-oasis liseduze, futhi lihlanganiswa ne-Omani idolobha Buraimi. I-Al Ain, ngokwempela Isiphethu idolobha elisenkabeni yesiFunda sase-Emirate Abu Dhabi, emngceleni we-United Arab Emirates nge Oman, eduze kwedolobha lase-Al-Buraimi. Yidolobha elikhulu kunawo wonke ezweni i-Emirates, elingelesine ngobukhulu (ngemuva Dubai, Abu Dhabi, kanye Sharjah), neyesibili ngobukhulu ku-Emirate of Abu Dhabi. Imigwaqo yamahhala exhuma i-Al-Ain, i-Abu Dhabi, ne-Dubai yenza unxantathu wokuma kwezwe ezweni, idolobha ngalinye licishe libe amakhilomitha we-130 ukusuka kwamanye amabili. Idolobha elinamandla lilindele wena ukuhlola i-Al Ain…
I-Al-Ain yaziwa nangokuthi "yiGarden City", ngenxa yokuluhlaza kwayo, ikakhulukazi maqondana nokugcwala kwedolobha, amapaki, izindlela ezenziwe ngomgwaqo nezihlahla ezizungezile zokuhlobisa, njengoba kunokulawulwa okuqinile kokuphakama ezakhiweni ezintsha, kuze kube ngaphezulu izitezi eziyisikhombisa, i-oasis ezungeze i-Al-Ain ne-Al-Hasa eSaudi Arabia yizona ezibaluleke kakhulu eNhlonhlo yase-Arabia. Lokho kusho, isifunda sase-Al-Ain kanye I-Al-Buraimi, i-Tawam noma i-Al-Buraimi Oasis iyona ebaluleke kakhulu ngokwesiko nangokomlando.
Idolobha linendawo eshisayo yasogwadule enezikhathi zasehlobo ezinde, ezishisa kakhulu nobusika obufudumele.
Ngaseningizimu yedolobha, eduze nase-Oman, kuneChibi laseZakher elenziwe umuntu, eliholele ekukhishweni kwamanzi amdaka ezitshalweni ezikhipha udaka. Futhi kulesi sifunda, empumalanga yeJebel Hafeet, kukhona indawo yaseMezyad, enomngcele onqamula ne-Oman, kulapho itholakala khona ingqophamlando yaseMezyad Fort.
Njengoba kunesibalo se-766,936 (se-2017), inengxenye ephezulu kakhulu yezizwe ze-Emirati (30.8%) ezweni, yize iningi lezakhamizi zingabokufika, ikakhulukazi abavela endaweni engaphansi kweNdiya. Abantu abaningi bavela eBangistan futhi
IPakistan, nenqwaba yama-Afghans avela esifundazweni saseKhost.
I-Al Ain yisikhungo sesevisi ebalulekile yendawo ebanzi enwelela e-Oman. Imboni iyakhula, kepha isesezingeni elincane, futhi ifaka phakathi isitshalo saseBoxa Cola kanye ne-Al Ain Portland Cement Works. Amanzi e-Al-Ain asezingeni elihle. Izimboni zezinsizakalo ezinjengokuthengisa izimoto, imishini kanye nezinye izingcweti zitholakala endaweni eyaziwa ngokuthi yi-Sanaiya nePattan Market. Ingqalasizinda yezenhlalo nekahulumeni ifaka amaKholeji aphezulu weTekhnoloji, izikhungo zezempilo ezihlonyelwe kahle kubandakanya isibhedlela sokufundisa eTawam, I-Al Ain International Airport, kanye nezindawo zokuqeqeshelwa ezempi.
Ingxenye yesifunda sase-Western Hajar esibaluleke kakhulu ngokomlando, indawo ye-Al-Ain noma iTawam sekuhlalwe kuyo iminyaka ecishe ibe yi-8,000, ngezindawo zemivubukulo zikhombisa ukuhlala kwabantu ezindaweni ezinjenge-Al-Rumailah, Hili neJabel Ḥafeet. Lamasiko okuqala azakhela amathuna “abafuyi bezinyosi” abafileyo bawo futhi aba ukuzingela nokubutha endaweni. Ama-oases ahlinzeka ngamanzi emapulazini okuqala kuze kube sesikhathini samanje. Kuma-2000s, i-Abu Dhabi Authority for Culture & Heritage yacela ukuthi yamukelwe njengeSayithi lamaGugu Omhlaba yi-UNESCO, futhi kwa2011, i-Al-Ain yaba indawo yokuqala yamagugu omhlaba e-UAE ukuqashelwa yi-UNESCO.
Amawa wedolobha ayaziwa ngohlelo lwawo lokunisela olungaphansi komhlaba oluletha amanzi kusuka kuma-boreholes aye emapulazini amanzi nasezivineni zesundu. Ukunisela i-Falaj uhlelo lwakudala oluqala emuva ezinkulungwaneni zeminyaka, futhi lusetshenziswa kabanzi ngaphakathi Oman, lo UAE, China, I-Iran nakwamanye amazwe. Kunamafutha ayisikhombisa lapha. Esikhulu kunazo zonke yi-Al Ain Oasis, eduze ne-Old Sarooj, kanti elincane kunazo zonke yi-Al-Jahili Oasis. Bonke abanye ngu-Al Qattara, Al-Muʿtaredh, Al-Jimi, Al-Muwaiji noHili.
Idolobha laziwa ngokuhlanganiswa kwalo kwezakhiwo zanamuhla nezangaphambi kwesimanje. Lokhu kokugcina kunikeza ukuqonda ngamagugu amasiko edolobha nezwe lawo.
Njengamanje, isonto lamaSulumane amakhulu kunawo wonke lelo iShaikha Salamah. Lapho nje isakhi se-Shekh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan sewakhiwe ngokuphelele, kulindeleke ukuthi sibe esedlula zonke kuleli dolobha, futhi singesinye samaSulumane amakhulu kuleli.
I-Al-Ain yathuthukisa njengendawo yabavakashi. Umoya owomile wasogwadule wenza ukuba kube yindawo evunyelwe yokubuya komswakama osogwini wamadolobha amakhulu. Izizwe eziningi ze-Emirati ku Abu Dhabi babe nezindlu zamaholide edolobheni okwenza kube yindawo ethandwayo yangempelasonto yemindeni evela enhloko-dolobha. Ukukhanga kwayo kufaka i-Al Ain National Museum, i-Al Ain Palace Museum, izinqaba eziningana ezibuyiselwe kanye nesayithi le-Hili Archaeological Park, elisusela emuva kwi-Bronze Age. UJebel Hafeet ubusa indawo ezungezile. Kuyathandwa ukuvakashela iziphethu zamaminerali eGreen Mubazarah ngaphansi kwentaba, nokushayela kule ntaba lapho kushona ilanga. Ezinye izinto ezikhangayo zihlanganisa i-Al Ain Zoo, ipaki yokuzijabulisa ebizwa nge "Hili Fun City", amapaki amaningi anakekelwa kahle athandwa yimindeni kusihlwa sasehlobo, kanye nedolobhana lamagugu. Ivulwe ku-2012, iWadi Adventure itholakala eduze kweJebel Hafeet futhi inikezela ngemisebenzi esekwe emanzini ebandakanya ukufaka i-surfing, kayaking kanye ne-rafting. Ngaphezulu kweJabel Hafeet kunehhotela iMercure. IMount Hafeet kanye namathuna 'asezinyosi' aseduze ayingxenye yalokho kwaziwa njenge- “Jebel Hafeet Desert Park” noma “Mezyad Desert Park”, okusho ukuthi kulondolozwe ubunjalo bendawo yendawo, ngaphandle kokuheha izivakashi.
I-Al Ain Mall enkabeni yedolobha,
I-Al-Jimi Mall esifundeni i-Al-Jimi,
IBawadi Mall esifundeni i-Al-Khrair,
I-Remal Mall etholakala esifundeni i-Sanaiya,
IHili Mall itholakala Esifundeni SaseHili.
Umsebenzi omningi wentengiso ugxile enkabeni yedolobha. Enye indlela yokudlala ethandwa i-Emiratis kanye nabaphesheya ngokufanayo bachitha isikhathi ezitolo zekhofi namakhekhe e-shisha. Kunama-Café amaningi e-Al-Ain, asayizi nosayizi. Idolobha lelo linomjikelezo ojwayelekile we-International go-kart. Ukhethwe i-Al-Ain Raceway ukusingatha ama-2007 Rotax Max World Karting Finals, umcimbi owabona abashayeli be220 beqhamuka emazweni angaphezu kwe-55 beqhudelana isihloko sePart world. I-Al-Ain Raceway ivulelwe umphakathi jikelele ngoMeyi 2008 futhi ifakazela umsebenzi othandwayo we-Emiratis nezivakashi zasendaweni. Kwamenyezelwa ngasekupheleni kwe-2010 ukuthi ama-2011 Rotax Max World Karting Finals azokuba se-Al-Ain Raceway, lokhu kuzoletha cishe izivakashi ze1000 edolobheni elincane lengadi. Njengalo lonke i-UAE, i-Al-Ain inemithetho eqinile elawula ukusetshenziswa kanye nokusatshalaliswa kotshwala. Izikhungo ezinhlanu edolobheni njengamanje zisebenzela utshwala, Ezine zazo zingamahhotela. Ngaphezu kwamahhotela, i-Al Ain Equestrian, Shooting & Golf Club e-Al-Maqam nayo isebenza ngotshwala.
I-Al-Ain iyindlela yokubuya kwezamasiko kubahlali emadolobheni aseDubai nase-Abu Dhabi. Kuyikhaya lomkhosi omkhulu womculo wasendulo, futhi iyikhaya le-Al Ain Club.
Jebel Hafeet. Intaba yesibili ende kunazo zonke e-United Arab Emirates (1350 m), iJebel Hafeet izungezwe amathafa asicaba ezinhlangothini ezintathu, anikeza ukubukwa okumangazayo, ikakhulukazi lapho kushona ilanga. Umgwaqo oya emimoyeni ephezulu ezungeze i-hairpin ujika nge-12 km. Kunamaphuzu amathathu wokuphumula wokubukwa, bese kuthi phezulu kakhulu indawo enkulu yokupaka enendawo yokubuka yokudlela ne-360 degree yonke indawo. Nakekela umgwaqo njengoba abanye abashayeli bejabulela injabulo yamawele futhi baphenduka kakhulu. Kunehhotela (Mecure Hafeet) phezulu, kanye neGreen Mubazara Park ne-Ain Al Fada ezitolo ezansi. Mahhala.
I-Al-Khrair Animal Souq, Ngemuva kwe-Bawadi Mall. Imini. Esanda kuthuthelwa kude nomngcele weMyzad, isouq yezilwane evulekile nsuku zonke. Amakhulu ngamakamela nezimbuzi, eceleni kwamabhele okudla, kuhlanganiswa ukuze kuthengwe futhi kuthengiswe. Gqoka ngokuvikelekile. Abadayisi banomusa omkhulu, ikakhulukazi ezinganeni. Abanye abathengisi bangacela imali (“baksheesh”) yokuvumela izingane ukuba zihlale phezu kwekamela. Abathengisi abaningi bazothatha izingane ukuze zithathwe izithombe. Mahhala.
I-Al Ain Museum neFort. Mahhala. Itholakala ku-Al Ain Street (noma “uMgwaqo Omkhulu” njengoba abantu bendawo bayibiza kanjalo), le nqaba yakhiwa ukuvikela ama-oasis kubahlaseli. Yayisetshenziswa njengendlunkulu kaSakhile Zayed ngenkathi ingumbusi wesiFunda sase-Abu Dhabi, ngaphambi kokunyukela kwakhe eSheikh yase-Abu Dhabi uqobo. Imnyuziyamu ibuyelela emuva indlela abantu bendawo abaphila ngayo ngaphambi kokusungulwa kwe-UAE.
I-Al Ain Oasis. Okukhulu kunamafutha amaningi esifundeni, i-oasis yenziwe ngezinkulungwane zezintende zezinsuku. I-oasis itholakala phakathi komgwaqo omkhulu we-souq downtown kanye nomgwaqo u-Al Ain. Imigwaqo emincane ihamba nge-oasis, ukuze ukwazi ukudlula kuyo, noma ukwazi ukuhamba. Ukuhamba e-oasis kuhle kakhulu lapho ilanga lingagudluli ngqo, njengoba izihlahla zesundu zinikeza umthunzi opholile. Mahhala.
Kukhona ne-zoo enkulu ne-safari park e-Al Ain ethandwa kakhulu ngabavakashi abazihambelayo. IGreen Mubazara iyipaki ethandekayo eduze kweJebel Hafeet enezindawo zokugeza ezishisayo ezihlukaniswe ngokobulili. Abesifazane kufanele balethe i-swimsuit enesizotha kanye ne-shower cap ukumboza izinwele zabo. Ungaba futhi nepikinikini noma i-BBQ ezindaweni eziqokiwe noma vele ubeke izinyawo zakho emifudlaneni yamanzi ashisayo athambile azungeze ipaki.
Phansi kweJebel Hafeet, ehlanganiswe phakathi kweziphethu ezishisayo kanye nezinhlelo zemhume yomgede weGreen Mubazzarah, uzothola ISIQINISEKISO SE-WADI - indoda yokuqala yaseMiddle East yenza ukufafazwa kwamanzi amhlophe, ukuswakama nokushayela lapho uya khona. Hlola imikhawulo yakho nge-airpark yethu eyinkimbinkimbi, umugqa we-zip, ukuswayipha okuphezulu nokukhuphuka odongeni, noma uphumule echibini lomndeni ngenqwaba yezitolo zokudla ukwanelisa okuthandwayo okuhlukahlukene. Ngemisebenzi esezingeni lomhlaba nezikhungo, insizakalo enhle kakhulu nokwasemuva okwenziwe njenganoma iyiphi enye, usuku lwakho kuWadi Adventure lungjabulisa noma luvuseleleke ngendlela ofuna ngayo.
Abu Dhabi ingosi
Izindawo ze-Archaeological of Bat, Al-Khutm ne-Al-Ayn e-Oman
UMadinat Zared, isikhungo sokuphatha esifundeni saseNtshonalanga
Ungawela umngcele e-Oman.
I-Arabia Center indawo ekhethekile yezitolo yabesifazane nge-ENB GROUP, etholakala eJabal Roundabout. Ukuheha okhethekile kokugqoka okungokwesiko kwama-Arabhu kanye nezingubo zasentshonalanga zamantombazane nezingane zabo.
I-Al Ain ibuye ibe nezindawo ezahlukahlukene zokuthenga, i-Town Center Area (Main Street, Khalifa Street, kanye no-Oud At Touba Street). Abathengisi bathengisa konke kusuka kumathoyizi ashibhile ezenziwe ngesikhumbuzo nezinzipho kuya kweziqholo, impepho yase-Arabia kanye negolide.
Ngisho nokugqoka okujwayelekile kwendabuko (okwenziwa ngabesifazane)) kwe-4 e-Al Ain. Ngemiklamo ephezulu ye-Abhaya, wonke ama-showroom enzelwe njenge-Arab Studios.
Izandla zezandla zeSouvenir Zonke izinhlobo zezandla, izigqoko zeKashmir, I-Cover Cover, i-Wall Hanging e-Al Ain Mall
I-Al Ain isingathwe ezinhlobonhlobo zamalulwane nobuhlanga uma kukhulunywa ngokudla. Ukudla kweLebanon / Arabic kushibhile; izindawo zokudlela zamahhotela zivame ukubiza kakhulu. Idolobha likhaya lazo zonke izinhlobo zokudla okusheshayo okufana nokukaMcDonald's noHardees, kodwa kuncane kakhulu okungadliwa ngabantu abaningi kulezo zindawo. Okunye kokudla okungabizi kakhulu futhi okushibhile edolobheni kungatholakala ezindaweni zokudlela eziningi zamaNdiya. Izingxenye cishe zihlala ziphana, amanani aphansi, nekhwalithi enhle kakhulu. Ukudla kwamaShayina kusendaweni enhle kakhulu ezindaweni zokudlela eziningi zamaShayina. Izakhamizi zithola ukukhethwa kuka-Al Ain njengokwanele.
Izindawo zokudlela kanye namakhekhe amaningi aya kule ndawo edolobheni. Ukulethwa kuyashesha futhi kuyathembeka futhi kuyaqabukela kubiza okungaphezulu.
Abasebenza ngemifino bazothola ukukhethwa kwedolobha lokudla okwanelisa kakhulu. Izitsha zendabuko ezinemifino nezinobhontshisi osindayo, uhlu lwezidlo zaseNdiya ezihlanzekile zemifino, nokutholakala kokulungela kwamasaladi amasha kwenza ukudla e-Al Ain kube yinto engacindezeli. Ama-vegans aqinile angaba nobunzima obuncane bokutshela izidingo zawo eziqondile, kepha izindawo eziningi zinikeza izitsha ze-vegan futhi zizimisele njalo ukuhlalisa ikhasimende elikhokhelayo.
Izindawo zokudlela ezinhle eziningi zigxilisiwe ku-Khalifa Street.
Umgwaqo omkhulu eMauteredh unesibalo esikhulu sama-cafeterias akhonza eLebanon ekudleni kwaseNdiya.
Utshwala buyatholakala ezindaweni zokudlela eziphambili zamahhotela. Kodwa-ke, kuyalulekwa ukuphuza ngokulingana njengoba kufana nakho konke okuse-UAE; akukho emthethweni ukudakwa ezindaweni zomphakathi.
Zizwe ukhululekile ukuhlola i-Al Ain…